⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: အမှန်တရားဝေးတဲ့ ကျန်ဝါးရေး
အမှန်တရားဝေးတဲ့ ကျန်ဝါးရေး
မှောင်ထဲမဲမဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီးတယောက် ဆေးသေတ္တာလေးကို ကိုင်ကာ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲမှ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် ထွက်လာစဉ်
ရပ်ကွက်ကင်းတဲမှ လှမ်းအော်မေးလိုက်သော အသံဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီးသည် ဖွန်ကြောင်သလောက် သမာဓိပိုးဖြင့်လည်း မြီးကောင်ပေါက်ကလေးများ နား ပွတ်သီးပွတ်သပ်ဖြင့် လက္ခဏာကြည့်ပေးသလို ဗေဒင်တွက်ပေးသလိုလိုအချိုး ဖြင့်
လက်ကလေးကိုင်ရနည်းလား အနံ့ လေးရှူရ ရှုံးရိုးလား ဟူသော ဆင်ခြေကို ရင်ဝယ်ပိုက်ကာ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်အလျှောက်အရွယ်ရောက်လာသော အခါ မီးယပ်နှင့်သားဖွားအထူးကုဖြစ်လိုစိတ် ပြင်းပျတော်မူလှ၏။
သို့ ကလိုဖြင့် ကျွန်ုပ်လည်း တိုင်းရင်းဆေးသိပ္ပံတွင် ဇာဒိဖ္ဖိုလ်သီး အကြောင်းသိကောင်းစရာ ကျမ်းတော်ကြီးကို ရေးပြီးသကာလ မြန်မာ့ရိုးရာ ဂိုင်နကော်လော်ဂျစ်ဘွဲ့ ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေးကာ
ဒေါက်တာတုတ်ကြီး ဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ဖြင့် ခြုံဖုတ်တောင်အလွတ်မပေးပဲ နှိုက်တော်မူတော့၏။
တုတ်ကြီးတို့ဘုန်းမိုးသို့ ချုန်း ပွေးပုန်း ရှိက လှန်ကာပြ မိန်းမဖြစ်စေ မငြင်းပေဘူး ဆိုသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် တောင်ကုတ် အနီး မြို့ တမြို့တွင် ဆေးခန်းထိုင်နေခိုက် ............
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်လာ၏ ။ အဖြစ်အပျက်တို့ က အချစ်အတွက် သစ်ကွက် တခုလုံး လက်ညှိုးထိုးရောင်းမိသည့်တောခေါင်းပမာ သဘောကောင်းသော တုတ်ကြီး အတွက်
အကွက်ဝင်လာသည် ယင်းကား ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပေတော့၏။
ပတ်ဝန်းကျင်က အမတ်မင်း ဟု ခေါ်တိုင်း ကျွန်ုပ် စိတ်ထဲတွင် တော့ “ အမတ် တုတ်ကြီး တုတ်ကြီးအမတ် ” ဟု မတ်မတ်ကြီး ကော့ကာ မော့မော့ကြီးကပ်နေမိတော့၏။
န၀တ ဆိုသည့်ကောင်စားများကလည်း စောက်ချဉ်မဟုတ် နောက်လင်ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည့်အတိုင်း ကတိမတည် အာဏာမပေးတော့ မခက်ပေလော ...။
တုတ်ကြီးတို့ က တုံးတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် ကိုယ့်မကိုက်သမျှ ပေါ့လေ နော် အဟက်ဟက်ဟက်ဟက်. ဆို တော့ကာ သဘော အလိုမကျသဖြင့် တောခိုရမှဖြစ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ
အိန္ဒြိယနယ်သို့ထွက်ခွာကာ လက်သာရာ လုပ်ရင်း ဆက်လက် ရပ်တည်လျှက် ၀ါသနာကလည်း ရှိ တတ်သည့်ပညာ မနေသာ ဆိုသည့်အတိုင်း ဆေးကုသခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း ကြုံသလို
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေခဲ့၏။ အာရောဂျံ ပရမံလာဘံ လို့အဆိုရှိပေသကိုး။
အိန္ဒြိယ ရောက် မာတုဂါမ များကလည်း အားကိုးရှာကြ၏။ ဒေါက်တား ဒေါက်တား ကျား မ နေးမကန်းဘူး ဖျားနေဒယ် ............. ကျွန်ုပ်ကလည်း ကန်းမလေး လာ ကွပ်ပျစ်ပေါ်တက် ပဲလက်လှန် ...
သို့ ကလို သို့ ကလို လက်စွမ်းပြမြဲ..........တတ်နိုင်ဘူးလဗျာ ဂိုင်နကော်လော်ဂျီနဲ့ ကျောင်းပြီးလာသကိုး ဗျ.............။
ဤသို့ ဖြင့် နှစ်ပေါင်းများ စွာ ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် ဒက္ခိဏဒေသတွင် တကိုယ်ထဲ ဗိုလ်စွဲနေသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးအနေဖြင့် နေပြီးသကာလ အရှေ့ ပိုင်းဒေသ မာတုဂါမ အခွင့်အရေးလှုပ်ရှား
မှုအတွက် ကမကထ ပြုသောအဖွဲ့ အစည်း၏ ဘဂျိုင်းနားဒေးအား တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသော်လည်း ပိုမိုအရေးလည်းပါ ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီး၏ ၀ါသနာနှင့်လည်းကိုက်ညီသော
အာပွား လိမ်ညာဖုံးဖိပုံဖျက် ရေးရာ ဌာနကိုဦးစီးရမည့် ကျန်ဝါးရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ ရုံးအဖွဲ့ မရှိသော ၀န်ကြီး အနေဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံ တွင်နေသော ဦး သလင်း ပြောင်တို့ကို ဘုလတို တို့ ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသမီး ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ ကကမ်းလှမ်းလာသဖြင့် ဒပ်ဘလင်သို့ ရောက်ခဲ့ရ၏။
Credential challenge ကိုထောက်ခံမယ်ဆိုရင် ကျုပ်ကတော့ နှုတ်ထွက်မယ် နော် ထွက်မှာပဲနော် တကယ်နော်...အဟုတ်နော် ထွက်မှာနော် ရဘူးနော် ထွက်ပစ်မှာပဲနော် ဟူသော ဦးသလင်းပြောင်၏ သွားမတိုက်သော ပါးစပ်မှ ပြောသော စကားကိုကြားသော်လည်း အစည်းအဝေးမှ ပြန်လာ ချိန်တွင် တကယ်ပင် ကျန်ဝါးရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ ပြိုင်ဘက်မရှိဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးသကာလ
ခပ်တည်တည်ဖုံးကွယ်ကာ ပဏာအပြည့်ဖြင့် ပုံ တုတ်ကြီး ကျန်ဝါးရေးဝန်ကြီး ဟူသော နာမည် ရာထူး ဖြင့် စာထုတ်ပစ်မည်ဟု ကြုံးဝါးလာခဲ့၏။
ကျွန်ုပ်လဲ ကျွန်ုပ်၏ ကိုပီတာအစုတ်ကလေးကို ဖွင့် ပြီး မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ၀ပ် ထဲတွင် တုတ်ကြီး ကျန်ဝါးရေးဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံ အမျိုးသမီးညွန့် ပေါင်းအစုိးရဟု မိန့် မိန့် ကြီးပြုံးကာ
ရဲရဲကြီးရေးချလိုက်ပါတော့၏။ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်တော့ အဟေးဟေး.... တကယ် အာဏာရပြီးရွေးကောက်ခံရတဲ့ ဘုရ်ှတို့အဖွဲ့တောင် မှ အလွန်ဆုံးရှစ်နှစ်ပဲ ဌာန လက်ကိုင်ရှိတာ ခွိခွိခွိဟု ရယ်ရင်း သဘောကျနေခိုက် ကျွန်ုပ်၏ ဇနီး ဖြစ်သည် မဒမ်တုတ်ကြီးက ၀က်ရူးတက်သည်အထင်နှင့် သူမ၏ ထွားကြိုင်းသန်မာလှသော လက်မောင်းကြီးများဖြင့် ချုပ်ကာ ကျွန်ုပ်၏လည်ပင်းအားလိမ်ချိုးလိုက်ပါတော့၏။
Posted by Nyein Zay Oo at 1:17 AM
ဟီးဟီး။ ကောင်းတယ်ဗျ။ ဇာတ်လမ်းအပြည်.အစုံတော.လုံးဝကိုမသိဘူး။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော.ပြည်ပမှာသောက်ရူးထ စားခွက်လုနေတဲ.ကောင်တွေ အကြောင်းကိုပြည်တွင်းမှာလုံးဝမသိနိုင်ဘူး။ များများကိုဆုံးမပေးရမယ်။သောက်ရူးထပြီးစားခွက်လုနေသရွေ. ဘယ်တော.မှရွေပြည်ကြီးနဲ.နီးမယ်မထင်.........
February 7, 2009 at 4:25 PM
အ သုံးလုံးသင်တန်းဆင်း၏ အမြင်
အောင်သောင်းတို့ ကတော့ ဘိုတစ် ပဲ လကွယ့်